यस्ता १० खाना जुन खादा तनावमुक्त भइन्छ - ज्ञानविज्ञान
यस्ता १० खाना जुन खादा तनावमुक्त भइन्छ
तुलसी प्राचीन कालदेखि नै तनाव मेटाउने औषधिको रुपमा प्रयोग हँुदै आएको छ । यसले दिमाग शान्त बनाउछ । दिमागको कमजोरीबाट मुक्त गर्छ र मुडलाई आनन्द प्रदान गर्छ ।
एक गिलास पानीमा २ देखि ३ एमएल तुलसीको थोपा मिसाएर पिउँदा तनाव व्यवस्थापनमा धेरै सहयोग गर्छ । तुलसीलाई चियाको रुपमा वा पत्ता पनि खान सकिन्छ ।
दैनिक ८ देखि १० वटा तुलसीको पात चपाउँदा तनाव न्यून हुन्छ ।
केरामा पोटासियम र कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् । केरा खानाले शरीरमा सेरोटोनिन नाम गरेको न्युरोट्रान्समिटर बढी उत्सर्जन हुन्छ, जसले तनाव कम गरी मानिसलाई शान्त राख्न मद्दत गर्छ ।
तनाव छ भने केरा खाने गर्नुस् ।
स्याउमा फस्फोरस र आइरन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्, जसले तनाव कम गर्न मद्दत गर्छन् ।
तनाव उत्पन्न भएको बेला खुम्चिएका कोषिकालाई यसले पूर्वअवस्थामा ल्याउन मद्दत गर्छ, जसले गर्दा तनावको असर कम हुँदै जान्छ । खासगरी तनावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको बेला प्रतिदिन एउटा स्याउ खानु उपयुक्त हुन्छ ।
तनावका असर कम गर्न उपयोगी अर्को फल हो, अमला । अमलामा भिटामिन सी पाइन्छ, जसले तनाव उत्पन्न भएका कारण रगतमा आएको रासायनिक परिर्वतनलाई पूर्ववत अवस्थामा पु¥याउन मद्दत गर्छ ।
त्यही भएर तनावपूर्ण दिनहरूमा प्रतिदिन दुइटा अमला खाने गर्नु राम्रो हुन्छ।
Don't Miss it केराको फूल खादा कुन कुन रोग भगाउन सकिन्छ ? जन्नुहोस
Up Next यस्ता छन्, मुख धुँदा गर्नु नहुने कुराहरु
आफ्नाे लागी धेरै अवसर कसरी प्राप्त गर्ने ? सहयाेगी टिप्स
हामी सबै अवसरकाे पर्खाइमा हुन्छाैँ । तर यत्तिकै बसेर अवसर आउँदैन । त्यसकाे लागी आफैले प्रयास गर्नुपर्छ । एउटा काममा…